Masuul Katirsanaa DFS Haddana Kamid ah Somaliland,”Midnimada Somalia iyo Somaliland Waa Muhiim Waan Awood Cusub”.
March 11, 2019 puntlandnews Somaliland, Wararka Maanta 0
Puntlandnews.net (Hargaysa)-Masuul xilal kala duwan horay uga soo qabtay dowladihii kumeel gaarka ahaa ee Soomaaliya xilligaanna katirsan maamulka Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay wada xaajoodka Muqdisho iyo Hargaysa & ahmiyadda midnimada labada dhinac.
Ismaaciil Maxamuud Hurre “Buubaa” wasiirkii hore ee Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya haatanna kamid ah xisbiyada mucaaradka Somaliland oo waraysi siinayey Warbaahinta Alnashra ee laga leeyahay dalka Lubnaan, ayaa siweyn u soo dhaweeyey Dhexdhexaadinta ay Dowladda Turkiga ugu kala dab-qaadayso DFS iyo Somaliland.
Ismaaciil Maxamuud Hurre Buubaa oo Xildhibaan iyo Wasiir ka soo noqday Dowladihii Somalia waxa uu Wareysigiisa ku xusay inay suurto-gal tahay in Dhexdhexaadintaasi laga gaaro Horumar, wuxuuna caddeeyey in xaaladda xilligaan lagu jiro aysan labada dhinac midkoodna dani ugu jirin haddii aysan is-afgarad gaarin.
Dhinaca kalena, mudane Ismaaciil Hurre Buubaa ayaa dowladda Turkiga ugu baaqay inay Kaalmooyinka ay siiyaan Somalia ballaariyaan, isla markaana Somaliland laga siiyo saamiga kaalmooyinkaasi loogu talagalay guud ahaan Dadka Soomaaliyeed.
Mar la wadyiiyey masuulkaan aragtidiisa ku aadan Midnimadda Somaliland iyo Somalia, waxa uu tilmaamay in Geeska Afrika u baahan tahay Somalia iyo Somaliland oo mideysan, si loo helo nooc kale oo tayo dheeraad ah, waa sida uu hadalka u dhigay.
Hadalka masuulkaan ayaa ku soo aadaya xilli ay socdaan dedaalo ay wadamo dhowr ah ku doonayaan inay wada xaajood miro dhal ah yeeshaan dowladda federalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda Somaliland oo horay dhowr jeer kulamadoodu u baaqdeen.